जनकपुरधाम दुई समुहबीच झडप, स्थिति नियन्त्रणमा लिन सात राउण्ड अश्रुग्यास प्रहार ! « MNTVONLINE.COM
जनकपुरधाम दुई समुहबीच झडप, स्थिति नियन्त्रणमा लिन सात राउण्ड अश्रुग्यास प्रहार !
जनकपुरधाम । सामाजिक सञ्जालमा पोष्ट भएको एक तस्बिरमा गरिएको ‘कमेन्टलाई लिएर जनकपुरधाममा दुई समूहबीच झडप भएको छ । झडप नियन्त्रणका लागि प्रहरीले अश्रुग्यास प्रहार गर्नु परेको छ । जनकपुरधाम उप–महानगरपालिका २० देवपुरा रुपैठामा शनिबार झडप नियन्त्रणका लागि प्रहरीले सात राउण्ड अश्रुग्यास प्रहार गरेको हो । मुस्लिम समुदायको मोहरम्म पर्वको लागि बनाइएको दाहाको फोटोमा समाजिक सञ्जाल फेसबुकमा कमेन्ट गरेकै नाममा दुई पक्षबीच विवाद भएको हो ।
सामान्य विवादको विषयले उग्ररुप लिएपछि अश्रुग्यास प्रहार गर्नु परेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय धनुषाले जनाएको छ । पैठाकामा एक हिन्दु समुदायका युवाले मोहरम्मको बनाइने दाहाको फोटोलाई सामाजिक सञ्जालमा टिप्पणी गरेपछि युवाबीच विवाद भएको थियो ।
मोहर्रमका लागि बनाइएको दाहामा आगो लगाइएपछि आक्रोशित समुहले त्यहीँ रहेको एक पसलमा तोडफोड गर्नुका साथै पसलनै भत्काएका छन् । झडपलाई नियन्त्रणमा लिनका लागि इन्सपेक्टरको कमाण्डमा ६० जनाको टोलीका साथै सशस्त्र प्रहरीको टोली समेत खटाइएको छ ।
असार २१ एजेन्सी । लायतमा थप दुई मन्त्रीले राजीनामा दिएका छन् । बालबालिका र परिवारमन्त्री विल क्विन्स र कनिष्ठ यातायातमन्त्री लौरा ट्रटले बुधबार राजीनामा दिएका
न्युजिल्याण्ड पठाइदिने भन्दै ९ जनाको ६३ लाख ठग्ने शोभा पक्राउ